IVirBELA kwakuwubuchwepheshe obuphazamisayo bemboni embonini ejwayele ukuphazamiseka kwezobuchwepheshe. Isebenza ngaphandle kwezakhiwo zangempela, i-eXp Realty ikhule isuka ekubeni isiqalo yaba nama-ejenti angaphezu kwama-29,000. Ngokwengxenye enkulu, abasebenzi bayo, i-CEO, kanye nama-ejenti bayakwazi ukusebenza kusukela lula ekhaya.
Ngendlela owenza ngayo emhlabeni wangempela, abantu abaseVirBELA bayakwazi ukwakha ubudlelwano ngezinhlobo zokushayisana kwezenhlalo ongaba nazo ehhovisi lezinkampani noma uzulazule esikhungweni somhlangano. Kufana nokuthi umi eceleni kwabanye, nihlangana ngamaqembu. Njenge-avatar enomsindo wesikhala ungahlala etafuleni lenkomfa ulalele umuntu ongakwesokudla endlebeni yakho yangakwesokudla, ngakwesobunxele endlebeni yakho yesobunxele ngomsindo we-3-D. Uphendulela ikhanda lakho ubuke ekamelweni lonke, nixoxe ngendlela eningathanda ngayo uma kufanele nidayise ngamamayela amaflaya amaningi ukuze nibe ndawonye.
Ngenkathi iVirBELA inamahhovisi omuntu oyedwa, izikhala ezinkulu ziyamangalisa. Manje inehholo elikhulu le-Expo Hall elakhiwe ngamadokodo ombukiso wezokuhweba, izindawo zokuphumula ezizimele, nokuningi.
Indlela enhle yokuqonda ukuthi yini i-VirBELA nokuthi ingakwenzelani wena izame for ngokwakho. Phakathi kwesisekelo samakhasimende kukhona bonke osayizi bezinhlangano kubandakanya amanyuvesi aphezulu, ama-Fortune 500's, ama-ejensi wezikhangiso ze-Mom & Pop, izikhungo ezihlinzeka ngamakhasimende akude, izinkampani eziningi zokuqeqesha (ngoba nazo zinamagumbi okufundela), namahhovisi asebenzayo / okwabelwana ngawo. Noma ngabe i-VirBELA noma enye ingxenyekazi yomkhiqizo engakakhishwa, ngiyaqiniseka ukuthi isikhala esibonakalayo esingu-3-D siyisiqondiso lapho izingqungquthela ezikude ziqonde khona.